Linux Mint 18.3 ichave nePlppak rutsigiro uye ichave yekupedzisira vhezheni ne KDE Edition | Linux Vakapindwa muropa
Mutungamiri weLinux Mint projekiti, Clem Lefebvre akaburitsa mushumo wemwedzi wepurojekiti, chimwe chinhu chatove chakajairika, asi nhau dzaakadurura pablog haina kujairika. Iyo inotevera vhezheni yeLinux Mint ichave yakakosha kune vakawanda, sezvo ichave iri vhezheni inoshandisa yepasirese mapakeji uye ichave iri yekupedzisira vhezheni ne KDE Edition.
Iyo purojekiti yasarudza kanzura iyo KDE Edition vhezheni mushure mekuyedza kwakasiyana-siyana kuri kuita chirongwa ichi kupa iyi vhezheni yeLinux Mint. Chekupedzisira, zvave zvisingaite kuchengetedza iyi edition uye vafunga kukanzura chirongwa ichi.
Izvi zvinoreva kuti Linux Mint 19 KDE Edition haizovipo. Nekudaro, izvi hazvireve kuti Linux Mint haibvumidze kuiswa kwePlasma kana kuti vashandisi veLinux Mint havagone kuisa iyo KDE desktop, kana vachizokwanisa kudaro uye vachizokwanisa kuisa nekushandisa Kubuntu repositori, seizvi kure kwandakaita, asi zvichafanirwa kuitwa paLinux Mint.
Chimwe chitsva icho Linux Mint 18.3 ichave iine kuiswa kweFlatpak mapakeji. Kugoverwa uko kwakavakirwa paUbuntu kuchabheja pane yakasarudzika Flatpak package uye kwete izvo chete asi muLinux Mint yekunyorera nzvimbo iyo ichazopa mafomu mune flatpak fomati sekunge zvaive zvakajairwa mashandisirwo.
Clem Lefebvre haataure nezve snap mapakeji, saka isu tinofungidzira kuti ppanguva ino Linux Mint haizove nerutsigiro rwemapakeji aya. Asi ivo havana kuvaramba futi, saka pamwe mune ramangwana shanduro dzeLinux Mint ivo vanoshandisa ese maviri marudzi emapasuru mapakeji. Chimwe chinhu chisiri chisina musoro uye kuti migove mizhinji iri kufunga kuchishandisa.
LMDE 3 yakataurwa zvakare muchinyorwa chino cheiyo Linux Mint blog. Iyo vhezheni iyo yakavakirwa paDebian ichave iri kutanga kwegore ra2018, ichave yakavakirwa paDebian Stretch uye ichave neCinnamon 3.8 se desktop huru. Zita remadunhurirwa reshanduro iyi richava Cindy.
Nhau idzi dzave kutopa zvakawanda zvekutaura nezvazvo uye kunyangwe chiri chokwadi kuti zvinonyadzisa kuti kunhuhwirira kwakadai kwakasiiwa, ichokwadiwo kuti Cinnamon, Xfce neMATE vari kure kure neKDE Edition uye zvinoda imwe mari kuti kugoverwa kushoma kunogona kuwana, saka zvinoita senge mhinduro ine musoro uye inonzwisisika. Asi Unofungei? Iwe unofunga kuti pachave neforogo yeKDE Edition?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Linux Mint 18.3 ichave iine Flatpak rutsigiro uye ichave yekupedzisira vhezheni ne KDE Edition
Ini ndinoda chaizvo kushanda naCinnamon, ndinonzwa kugadzikana naye.
KDE yakanaka asi inogona kuiswa neTerminal, ini handione yakawanda dambudziko.
Ndinovimba vanosimbisa Snap futi, neizvozvo pachave nekuwanda kunyorera uye nyore kwekumisikidza